Sanado Kadib Calanka Dowlada Suuriya oo Laga Taagay Magaalada ... | Universal Somali TV
Sanado Kadib Calanka Dowlada Suuriya oo Laga Taagay Magaalada Deraa
Xukuumada suuriya ayaa Calanka dalkaasi ka taagtay Magaalada Deraa ee koonfurta dalkaasi oo gacan ku heynteeda ay si rasmi ah ula wareegtay maalmihii la soo dhaafay.
Magaalada oo sanado badan ay mucaaradka heesteen ayaa ugu danbeyn ka fara baxday taasi oo ka dhigeysa in guushii ugu weyneyd uu ka gaaray madaxweyne Bashar Al asad dagaalkii uu kula jiray sideedii sano ee la soo dhaafay mucaaradka dalkaasi.
Tv-ga dalkaasi ayaa baahiyay in ciidamada dowlada ay calanka dalkaasi ka taageen xarunta boostada ee magaalada Dera oo ah xarunta kaliya oo mucaaradka ka bilaabeen ololihii kacdoonka ee sanadii 2011 -kii dalkaasi ka bilowday.
Milatariga suuriya oo Gacan ka helaya duqeymaha diyuuradaha dagaalka ee Ruushka sadexdii todobaad ee la soo dhaafay ayaa sahlay in dowlada suuriya ay dib ula wareegto Gobolka Deraa oo xuduud wadaag la ah Dalalka Jordan iyo Israel.
Tan ayaa waxay ka dhigan tahay in badi dalka suuriya Gacan ku heyntiisa markale maamulka bashar al asad uu dib ugu soo laabtay kadib dagaal sokooye oo ka dhacay dalkaasi.
Dagaalada Suuriya ayaa waxaa ku dhintay sideedii sano ee la soo dhaafay kumaan ruux halka in ka badan 11 Million ay barakacaal ku noqdeen wadamada caalamka iyo dalalka dariska.
Dowlada iiraan iyo ruushka oo saaxiib dhow la ah suuriya ayaa waxaa ay gacan ka geysteen in ay milatariga dalkaasi ay qabsadaan gobolo badan oo mucaaradka heesteen.
Kan-xigaBaadi Goobka Dad lagu la yahay fataha...
Kan-horeImaaraadka oo Lagu eedeyay Xadgudub K...
39,219,515 unique visits